Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai ary Amsterdam sidina avy any Prague amin'ity ririnina ity
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai ary Amsterdam sidina avy any Prague amin'ity ririnina ity
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai ary Amsterdam sidina avy any Prague amin'ity ririnina ity.
Fandaharana sidina ririnina amin'ny ririnina 2021: Fifandraisana mivantana avy any amin'ny seranam-piaramanidina Prague mankany amin'ny toerana 100 efa ho XNUMX ary nitombo ny matetika amin'ny lalana efa misy.
Hisy fifandraisana vaovao atolotra mandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina. Wizz Air dia hanolotra sidina avy any Prague mankany Roma, Catania ary Naples, raha toa kosa ny Smartwings manampy sidina mankany Dubai sy London.
Ny zotra mankany Tel Aviv dia hiasa amin'ny Israir Airlines, Blue Bird Airways ary Arkia Airlines amin'ny vanim-potoana ririnina 2021.
Hisy ihany koa ny lalana vaovao tanteraka amin'ity vanim-potoana ririnina ity, dia ny zotra Prague – Odessa, amin'ny Bees Airline, ary SkyUp Airlines fifandraisana vaovao mankany Kyiv. Ny lalana vaovaon'i Ryanair dia hanatsara ny fidirana amin'i Warsaw sy Naples.
Manomboka ny alahady 31 oktobra 2021, ny fandaharam-potoan'ny sidina amin'ny ririnina dia manan-kery, manolotra fifandraisana mivantana avy amin'ny Seranam-piaramanidina Václav Havel Prague mankany amin'ny toerana 92, anisan'izany ireo firenena vahiny toa an'i Kenya, Meksika ary ny Repoblika Dominikanina. Hisy ihany koa ny zotra vaovao miasa ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny sidina ririnina, ohatra, mankany Tel Aviv, Naples, Odessa, Kyiv, Dubai ary Amsterdam. Hanampy amin'ny fanamorana ny famerenana sy ny fampivoarana bebe kokoa ny fifamoivoizana an'habakabaka koa ny fandefasana ny tobin'ny Eurowings.
Araka ny fandaharam-potoana sidina ririnina amin'ny ririnina 2021, mpitatitra an'habakabaka 47 no hiasa mivantana avy any / mankany Prague. Ny orinasa Alemanina Eurowings, mpikambana ao amin'ny vondrona Lufthansa, dia manokatra ny toby ao amin'ny Seranam-piaramanidina Prague. Ny Airbus A319 roa dia handefa fifandraisana amin'ny toerana 13 eoropeana, anisan'izany ny Nosy Canary sy Barcelona. Ryanair dia nanomana fifandraisana avy any Prague mankany amin'ny tanàna 26, anisan'izany ny toerana malaza toa an'i London, Krakow ary Dublin. Ny Vondrona Smartwings dia hanao fifandraisana amin'ny toerana efa ho 20 eo ambanin'ny fandaharam-potoana sidina amin'ny ririnina, toy ny Nosy Canary, Madeira, Hurghada, Paris ary Stockholm. Ny fifandraisana sata mivantana mankany amin'ny toerana hafahafa toa an'i Maldives, Punta Cana, Mombasa, Cancún ary Zanzibar dia azo alaina ihany koa amin'ny Seranam-piaramanidina Václav Havel Prague.
Araka ny fandaharam-potoan'ny sidina ririnina 2021, mpitatitra an'habakabaka 47 no hanao sidina mivantana avy any/ho any Prague. Ny orinasa Alemanina Eurowings, mpikambana ao amin'ny vondrona Lufthansa, dia manokatra ny toby ao amin'ny seranam-piaramanidina Prague. Ny Airbus A319 roa dia handefa fifandraisana amin'ny toerana 13 eoropeana, anisan'izany ny Nosy Canary sy Barcelona. Ryanair dia nanomana fifandraisana avy any Prague mankany amin'ny tanàna 26, anisan'izany ny toerana malaza toa an'i London, Krakow ary Dublin. Ny Vondrona Smartwings dia hanao fifandraisana amin'ny toerana efa ho 20 eo ambanin'ny fandaharam-potoana sidina amin'ny ririnina, toy ny Nosy Canary, Madeira, Hurghada, Paris ary Stockholm. Ny fifandraisana sata mivantana mankany amin'ny toerana hafahafa toa an'i Maldives, Punta Cana, Mombasa, Cancún ary Zanzibar dia azo alaina ihany koa amin'ny Seranam-piaramanidina Václav Havel Prague.
“Faly izahay mijery ny fiverenan'ny zotra efa niasa teo aloha, ny fandefasana ny fifandraisana amin'ireo toerana vaovao, ary ny fitomboan'ny matetika amin'ireo zotra efa misy. Noho ny fironana amin'izao fotoana izao dia nahatratra telo tapitrisa mahery ny mpandeha tamin'ny tapaky ny volana Oktobra. Manantena ihany koa izahay fa, noho ny fifandraisana vaovao atolotra eo ambanin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina amin'ny ririnina, dia hitombo hatrany ny isa. Mbola lavitra ny isan'ny mpandeha voarakitra tamin'ny taona 2019 izahay, fa raha jerena ny isan'ny toerana atolotra, dia manakaiky izahay, ”hoy i Jiří Pos, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny seranam-piaramanidina Prague, ary nanampy hoe: “Amin'ny ho avy. amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina, manantena ny fitomboan'ny fahalianan'ny mpitsangatsangana Czech izahay amin'ny dia mankany amin'ny toerana hafahafa. Faly izahay fa afaka misafidy amin'ny safidy maro izy ireo ary mandeha mivantana na miaraka amin'ny fifindrana. ”
Miaraka amin'ny famerenana tsikelikely ny fifamoivoizana an'habakabaka, dia averina any Prague ny fifandraisana natomboka. Ny British Airways indray dia hampifandray an'i Prague amin'ny seranam-piaramanidina an-tanàna any afovoan-tanànan'i London, ny Czech Airlines dia hamelona indray ny lalana mankany Copenhague, Ryanair dia hanohy ny serivisy mivantana mankany Barcelona, ​​​​Paris ary Manchester, raha toa kosa ny Jet2.com dia hamerina ny sidina mankany Birmingham, Manchester, Leeds ary Newcastle.